ठूला दलले कहिले छान्छन् उम्मेदवार ? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
ठूला दलले कहिले छान्छन् उम्मेदवार ?
कांग्रेसले आगामी ७ वैशाखभित्र स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट गर्ने भएको छ । १५ चैतको केन्द्रीय समिति बैठकले स्थानीय तहको चुनावका लागि ७ वैशाखसम्म उम्मेदवार छनोट गरिसक्ने निर्णय गरेको हो । सो बैठकले ७ वैशाखभित्र उम्मेदवार छानेर केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको थियो । अन्तिम मिति घोषणा गरे पनि कांग्रेसले कुन तहको उम्मेदवारको टुंगो कहिले लगाउने भन्नेबारे केही खुलाएको छैन । उम्मेदवारको मनोनयन पत्रमा जिल्ला सभापतिले हस्ताक्षर गर्नुपर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ ।
रमेश सापकोटा, शुरोजंग पाण्डे, रामकृष्ण अधिकारी /नयाँ पत्रिका